DAAWO VIDEO: Wax qabadka Layaabka leh oo Farmaajo iyo Kheyre Soomaaliya oo loosoo shaqo tagayo | Allbanaadir Media
DAAWO VIDEO: Wax qabadka Layaabka leh oo Farmaajo iyo Kheyre Soomaaliya oo loosoo shaqo tagayo
Horaantii sanadkii 2018 bilowga curashada Dowladda haatan jirta waxaa dalka ka jirtay xaalad Abaar oo aad u daran taasi oo saameyn xoogan ku laheyd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed .
Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo doorashadiisa kadib waxa xaaladihii uu wajahay ka mid ahaa sidii dalka looga samata bixin lahaa Abaartaasi iyo in la hirgeliyo siyaasad looga gaashaamanayo ineysan Abaar taasi la mid ah dalka soo marin.
Ka sokoow in dalka loogu gurmado Abaartii jirtay waxaa siyaasadda Madaxweyne Maxamed C/laahi Famaajo koow ka ahaa in lasoo nooleeyo wax soo saarka dalka ayadoo taasi loo marayo in la dhiiri geliyo wax soo saarka Beeraleyda Soomaaliyeed tallaabadaas waxa uu Madaxweynaha u arkayey iney fure u tahay xalka Abaarro dalka kusoo noq noqda.
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo fulineysa siyaasadda Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo waxa ay qaaday tallaabooyin lagu dhiiri gelinayo beeraleyda Soomaaliyeed si ay wax soo saar u sameeyaan.
Waxaa shirar Wadatashi ah ay Wasaaraddu u qabatay Wasaaradaha Beeraha iyo Waraabka ee Dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka iyo aqoonyahanno si loogala tasho fulinta siyaasadii Madaxweynaha Jamhuuriyadda ee in la kobciyo wax soo saarka beeraha Dalka.
Kulammo dhiiri gelin ah ayaa loo qabtay Beeraleyda Soomaaliyeed ayadoo kulammadaasina ay xigeen ficillo isugu jira dhiiri gelin iyo taakuleyn loo sameeyey Beeraleyda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Dalka.
Tani waxa ay keentay iney si xoogan u kordhaan tabcida beeraha Dalka, waxaa in ka yar sanad gudihiisa la tacbay beerro badan oo waxaa lasoo saaray dalag daboolay baahi badan.
Maadaama ay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dalka ku guuleysatay in la kordhiyo wax soo saarka dalaga beeraha ayaa hadaba si beeraleyda loogu dhiiri geliyo tacabka waxaa Wasaaraddu heshiis ku aadan in la joojiyo raashiinkii deeq ahaan dibadda looga keeni jiray & heshiis ku aadan in dalaga beeraleyda Soomaaliyeed laga iibsado Wasaaradda Beerahu la saxiixatay hay”adda Cuntada Aduunka ee WFP.
Qorshahan lagu joojinayo raashiinkii dibadda laga keeni jiray oo lagu dhiiri geliyo beeraleyda waxa ay ka dhigan tahay iney meel martay siyaasaddii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ee ku aadaneyd in dadkeenu yeeshaan wax soo saar mug leh.